Miyuu macquul yahay in uu shaqaalaysiiyo la taliyaha suuq-geynta Amazon?
Ganacsatada internetka ee khibrad u leh ganacsiga e-ganacsiga ayaa inta badan la kulmaan dhibaatooyin marka laga soo saaro alaabta Amazon. Sidaad ogtahay, aragtida waa ka duwan tahay dhaqanka. Taasina waa sababta aysan caadi ahaan ahayn mid ku filan in lagu baro aragtida sheekooyinka Amazon iyo barashada. Waxaad ubaahan tahay qof aqoon u leh sida nidaamka taxanaha Amazon uu ula shaqeeyo waayo-aragnimada koowaad. Taasi waa sababta ay macquul tahay in loo raadsado qaar ka mid ah la-talinta khabiir.
Sababaha ugu muhiimsan ee ganacsatada Amazon waxay raadinayaan la-taliyeyaasha iibinta waxaa ka mid ah:
iibiyayaashu ma rabaan inay lacagahooda kaga tagaan miiska sababtoo ah boqolkiiba liiska;
Ganacsatada ma laha inay joogaan Amazon oo ay joogaan ayna doonayaan in ay alaabahooda ka dhigaan kuwa macaamiisha ah;
haddii horayba u jirey alaabta Amazon waxaa lagu iibiyaa shirkado kale iyo kuwa iibiya;
markii ganacsatadu ogaadaan in aanay fulin iyo sidoo kale waxay noqon kartaa.
Dhammaan arrimahaas waa la xallin karaa. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad wakhti ku qaadato cilmi baaris iyo falanqeyn ku saabsan liiskaaga hadda ee Amazon. Ka dibna waxaad u baahan tahay inaad dhisato olole suuq-gaab ah suuq-galka, hirgelinta qalab badan iyo tabaha wax-qabadka. Waxay u baahan tahay aqoon iyo khibrad gaar ah.
Waxaa jira kala duwanaansho iyo qasaaro kala duwan oo ku saabsan maamulida kanaga Amazon. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood waxay u yimaadaan isla mabaadi'da ganacsiga - waqti iyo lacag. Waxaad u baahan tahay inaad wakhti dheeraad ah ku qaadatid ololaha suuq-geynta suuq-geynta. Markaa waxaad u maleyneysaa inta lacag ah ee aad sameyn kartid liiska ku habboon liiska Amazon. Si kastaba ha ahaatee, weli, waxaad u baahan tahay inaad xisaabiso inta lacag ee aad lumi karto sababtoo ah waqtiga aad tuurayso fulinta dhammaan istaraatijiyadaha istaraatiijiga ah ee ganacsigaaga Amazon. Ma jirto meel dhexe oo u dhaxaysa waqti iyo lacag marka ay timaado horumarinta ganacsiga. Taasi waa sababta ganacsiyada intooda badani ay go'aansadaan inay ku tiirsan yihiin xirfadle xirfadeed oo Amazon ah si ay u badbaadiyaan waqtigooda iyo lacagkooda.
Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonaa sababaha ugu muhiimsan ee ay ugu wanaagsan tahay in lala shaqeeyo la-taliyaha iibka Amazon marka aad maareysid ganacsigaaga.
Sababaha ugu muhiimsan ee loo shaqaalaysiiyo la taliyaha suuq-geynta Amazon
Iyadoo lala kaashanayo khabiirka iibka ee Amazon, waxaad ka boodi kartaa curvaha waxbarashada
Waxaa jira habab badan, shaabadooyin, iyo habab gaar ah Kooxaha la-talinta xirfadlayaasha ah ayaa adeegsanaya si ay uga caawiyaan macaamiisha bilaabi karaan oo ay ugu fiicnaan lahaayeen alaabta ay ku leeyihiin Amazon. Inta badan nidaamyadani weligood lagama hadlin. Sidaas darteed, ma heli doontid wax macluumaad ah oo ku saabsan internetka. Qaar badan oo ka mid ah hababkani waxaa la sameeyaa hal mar inta lagu jiro hannaanka wax-qabadka, ama kiis marka wax qaldamaan. Uma baahnid inaad tagto faahfaahin kasta oo ku saabsan sida wax waliba laguu qaban doono. La-taliyeyaashaaga iibka ayaa maamula dhammaan qadada iyo dhibaatooyinka dhibaatooyinka jira sida dhibcaha darajada, dhibaatooyinka macaamiisha, fulinta, iyo wixii la mid ah. Waxay ka faa'iideysan doonaan dhammaan fursadaha suurtagalka ah iyo xalinta dhibaatooyinka ku jira burooyinkooda.
Xirfadlayaasha suuq-xirfadeed ee Amazon ayaa ku siin doona helitaanka hababka ugu fiican iyo qalab wax ku ool ah
Ganacsatada maamula xisaabaadka Amazon iyaga oo iskaa ah, badanaa ma heystaan ​​waqti cilmi baaris iyo horumarin ganacsi maadaama ay yihiin ka shaqeynta dhammaan hawlaha caadiga ah ee maalin kasta sida handasinta dhalmada, adeegyada taageerada macaamiisha iyo maaraynta hantida kale. Sidaa darteed, waxay noqon kartaa mid caqabad ku ah in ay la socoto dhammaanteed oo leh dhammaan jimicsiyada suuqyada iyo horumarinta warshadaha. Sidaas, waxaad u baahan tahay qof si joogto ah ula socdo suuqyada Amazon iyo ogaadaan dhammaan raadinta iyo isdhexgalka PPC algorithm, kartida platform iyo sidoo kale on. La-taliyaha suuq-geynta Amazon ayaa kaa caawin doona inaad hagaajiso ganacsigaaga dhammaan munaasabadaha ganacsiga ee ganacsiga iyo ganacsigaaga ka ilaalin kasta oo khasaaro iyo darajo. Intaa waxaa dheer, khabiir amazon ah oo tilmaamaya sida isbeddeladani u caawin karaan ganacsigaaga. Khabiirka iibka ee Amazon ayaa kaa caawin doona inaad la xisaabto xisaabtaada Amazon ganacsiga waxayna ku siineysaa wakhti aad ku xoogga saarto arrimaha aasaasiga ah ee ganacsiga iyo wax soo saarka
Ganacsiyada intooda badan, gaar ahaan kuwa waaweyn, isticmaal Amazon sidii suuq dheeraad ah oo loogu iibiyo walaxda. Sidaa darteed, waxay ku tiirsan yihiin arrimo wax soosaaraya iyo suuqa ugu muhiimsan sida ilaha webka ama dukaanka offline. Way adagtahay in la maareeyo loona kobciyo iibsiyo badan oo kala duwan, qaybinta, iyo kanaalada suuq geynta oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaatay in ganacsiga Amazon uu u baahan yahay waqti iyo maalgelin, mararka qaar xittaa ka badan waxaad u baahan tahay inaad maalgashato marka ganacsigaaga ganacsi.
Shirkadaha guusha leh marnaba ha ku nasnaayaan xafladaha marka ay timaado horumarinta ganacsiga. Mar walba waxaa jira waxyaabo cusub oo lagu tijaabinayo, qaar ka mid ah horumarinta cusub ee hirgelinta, qaar ka mid ah qaababka cusub ee loo bilaabi lahaa, iyo isbedelka. Ganacsatada faa'iidada leh xataa xitaa ma joojin karaan sababtoo ah waxay u horseedi kartaa lacag khasaaro. Mar walba waxay ku socdaan si ay u helaan habab cusub oo ay u kicinayaan qiimaha ayna kordhiyaan faa'iidada. Horumarinta Ganacsiga waa habka ugu waxtarka badan ee lagu kicin karo kharashaadka oo lagu beegsan karo macaamiisha mustaqbalka. Sidaa daraadeed, ganacsatada faraha badani waa inay si habboon u qoondeeyaan waqtigooda iyo hantidooda.
Waxaad u baahan tahay inaad waqti dheeraad ah u qaadato ganacsiga istiraatiijiga ah, iyo horumarinta wax soo saarka marka loo eego badeecaddu waxay ubaahaneysaa tartanka iyo akhrinta tabta ugu dambeysa ee Amazon. Isticmaalka xirfadlaha adeega Amazon ee xirfadle ah, waxaad xoogga saari kartaa waxyaabaha asaasiga ah iyo waxyaabaha muhiimka ah, halka dhinacyada kale ay maamuli doonaan xirfadlayaasha. Fikradaha kama dambaysta ah
Si loo soo koobo, dhammaan wixii aan kor ku soo sheegnay, waxaan dhihi karaa waa macquul iyo qiimo-ku-ool ah in lagu shaqaaleeyo iibka Amazon la-taliye, gaar ahaan haddii aad tafaariiqdaada ku iibinayso suuqyo badan. Haddii aad doonayso inaad sii wanaajiso liiskaaga Amazon ama aad u habeysid ololaha xayaysiiska riix-riix-riix-riix, waxaad heli doontaa wax badan adigoo la shaqeynaya xirfadlayaal khibrad leh, intii aad samayn lahayd. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad wakhti ku qaadato horumarinta ganacsigaaga iyo horumarinta Source .